Ceni : ”tsy mazava ny fifidianana hatao” | NewsMada
Ceni : ”tsy mazava ny fifidianana hatao”
“Mipetraka ny ahiahy, tsy mazava ny lalan-kizorana. Ny antony, raha hanomana fifidianana, na ny mpirotsa-kofidina izany, na ny mpanomana sy mpikarakara fifidianana, mila mahafantatra hoe: inona ny fifidianana hatao, ary amin’ny fotoana inona ny hanaovana azy?” , hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ny faramparan’ny taona teo, momba ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana taona 2018.
Mila vola sy paikady ny fanomanana fifidianana, araka ny nambarany. Koa raha tsy fantatra ny karazam-pifidianana hatao sy ny fotoana hanaovana azy, ho vola sy fotoana very maina ary handeha an-jambany ny fiomanana rehetra.
Zavatra roa no angatahin’ny olona amin’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao: ny filazan’ny fitondram-panjakana amin’ny fomba ofisialy fa hanaja ny lalàna sy ny lalàmpanorenana izy. Tsy hisy ny fanitarana ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika amin’izany.
Tokony hambaran’ny fitondram-panjakana izay karazam-pifidianana hatao: fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana sa fifidianana filohan’ny Repoblika mandeha mitokana sa fifidianana filohan’ny Repoblika miaraka amin’ny fifidianana solombavambahoaka? Samy hafa avokoa ny mety ho fiomanana hatao amin’ireo karazam-pifidianana na fitsapan-kevi-bahoaka ireo, raha ny fanazavany ihany.